Horjoogaha hore ee gobolka Jeremy Taylor ayaa mar kale u tartamaya kursi ka tirsan Golaha Deegaanka | KWIT
Mid ka mid ah dillaaca coronavirus-ka ee ka dhacay warshad hilibka lagu iibiyo ee Iowa ayaa ka sii darnayd sidii hore loo ogaa. Waaxda Amniga Dadweynaha ee Iowa waxay leedahay maanta laba jeer inbadan oo shaqaale ah ayaa cudurka qaaday.
5-tii Maajo, waaxdu waxay sheegtay in 221 shaqaale oo ka shaqeeya warshaddii hilibka doofaarka ee Tyson Foods ee ku taal Columbus Junction ay tijaabisay COVID-19. Si kastaba ha noqotee, saraakiisha Tyson waxay u sheegeen kormeerayaasha badbaadada goobta shaqada maalmo ka hor in 522 shaqaalaha warshada ay tijaabiyeen si wanaagsan aqoontooda.
Tobaneeyo ka mid ah dhirtu qiyaastii 1,300 oo shaqaale ah ayaa la rumeysan yahay in isbitaal la dhigay wakhtigaas, laba kalena way dhinteen kadib markii uu ku dhacay cudurka fayraska, saraakiisha Tyson waxay u sheegeen Badbaadada Shaqada iyo Maamulka Caafimaadka Iowa.
Gobolka Woodbury wuxuu duubay geeri dheeri ah oo loo aaneynayo sheekada coronavirus ee sheekada. Waaxda Caafimaadka ee Degmadda Siouxland ayaa Arbacadii sheegtay in nin da '41-60 jir ah uu u dhintey COVID-19, taas oo kordhisay dhimashada cudurka neef-mareenka ee gobolka oo gaarey 47.
Waa dhimashadii ugu horreysay ee laga diiwaan geliyo Gobolka Woodbury muddo lix maalmood ah. Waaxda waaxda caafimaadka ayaa soo warisay 11 xaaladood oo cusub oo Arbacadii laga soo qaaday 121 baaritaanno cusub oo la sameeyay.
Ilaa duhurkii, Gobolka Woodbury wuxuu la kulmay 3,493 xaaladood, sida laga soo xigtay xogta Caafimaadka ee Iowa. Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sheegay in 3,154 ka mid ah kiisaskaas ay soo kabsadeen. In ka badan 800 oo qof oo qaba COVID-19 oo ku sugan Iowa ayaa ku dhintey, iyada oo gobolka uu soo sheegay 10 kale oo dheeri ah iyo 374 kale oo la xaqiijiyay kiisaska cudurka coronavirus, gobolka ayaa sheegay Arbacadii.
U.S. Sen. Chuck Grassley ayaa Arbacadii u dooday in si toos ah coronavirus loo dhiibo lacag bixinta canshuur dhimista.
Jamhuuriyadda Iowa Republican ayaa ka gaabisay inay sameyso saadaalin la taaban karo oo ku saabsan waxa qabyada ah ee kama dambeysta ah ee xirmada gargaarka maaliyadeed ay qaban karto maxaa yeelay wada hadalada ayaa socda. Hogaamiyaha Aqlabiyada Senate-ka Mitch McConnell wuxuu sheegay in xirmada ay tahay inaysan ka badnaan $ 1 tiriliyan - qiyaastii sedex meelood meel qiimaha wixii aqalka Dimuqraadiga hogaamiyay ay ogolaadeen bishii May.
Grassley wuxuu yiri "GOP caucus wuxuu qabaa walaac ku saabsan deynta qaranka. Waaxda Adeegyada Aadanaha Iowa ayaa maanta shaacisay in agaasimaha Medicaid ee gobolka Mike Randol uu shaqada ka tagayo bisha soo socota.
Wasaaraddu ma sheegin waxa shaqadan cusub ee Randol ay noqon doonto, laakiin waxay ku sheegtay war-saxaafadeed ay ku tegeyso "waaxda khaaska ah" 14ka Ogosto.
Randol wuxuu gobolka kusoo biiray bishii Diseembar 2017 isagoo hoos yimid Agaasimihii hore ee DHS Jerry Foxhoven. Wuxuu kormeer ku sameeyay isbedelka gobolka ee barnaamijka gaarka loo leeyahay ee Medicaid, kaas oo muran ka taagnaa tan iyo markii Gov. Terry Branstad uu ku dhawaaqay isbadelka 2015. Barnaamijku wuxuu u adeegaa in kabadan 700,000 Iowans.
Randol wuxuu horey u ahaa agaasimaha barnaamijka 'Kansas' ee Medicaid, kaasoo sidoo kale leh nidaam ay maamulaan shirkadaha gaarka loo leeyahay.
Gobolka Iowa ayaa soo sheegay 512 xaaladood oo kale oo ah coronavirus ilaa galabta
By Halima Osman • Jul 21, 2020
Gobolka Iowa ayaa soo sheegay 512 xaaladood oo kale oo ah coronavirus ilaa galabta. Saraakiisha caafimaadka gobolka ayaa sidoo kale soo sheegaya shan dhimasho oo dheeri ah. Gobolku wuxuu lahaa in kabadan 39,000 oo kiis oo ah COVID-19 iyo ku dhawaad 800 oo dhimasho ah. Gobolka Polk wuxuu leeyahay tirada ugu badan ee kiisaska, oo leh in kabadan 8,000 iyo Woodbury County waxay leedahay lambarka labaad ee ugu sareeya ee COVID-19 kiis oo leh 3, 472.
Gobolka Woodbury wuxuu ku daray 20 kiis oo cusub oo ah cudurka coronavirus maanta. Ma jirin dhimasho cusub shalay.